‘रुपसी र भद्र’आइपुगे काठमाडौं, जादैछन् चीन ! - ‘रुपसी र भद्र’आइपुगे काठमाडौं, जादैछन् चीन !
‘रुपसी र भद्र’आइपुगे काठमाडौं, जादैछन् चीन !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २७ असार 50 Views
काठमाडौं । नेपाल सरकारले यहि असार २८ गते उपहारका लागी चीन पठाउन लागेको दुर्लभ एकसिंगे गैंडाको एक जोडी ‘रुपसी र भद्र’ काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
चितवनबाट मंगलबार एक कार्यक्रमकाबीच बिदाई गरिएको गैंँडा गएराति विशेष सुरक्षा सर्तकताका साथमा काठमाडौं ल्याएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख रामकुमार अर्यालले सडकमार्ग भएर गैंँडा सहज रुपमा काठमाडौं भित्र्याइएको बताए ।
काठमाडौं ल्याइएको गैँडा चीन पठाउने तयारी भइरहेको छ । अहिले उक्त गैंँडाको जोडीलाई ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको छ ।
काठमाडौँबाट गैंँडालाई विशेष कार्गो जहाजमा चीन पठाइने छ । केही समय गैंँडाको रेखदेख र चिनियाँ प्रतिनिधिलाई सिकाउनका लागि चितवन निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा.कमल गैरेको नेतृत्वमा कोषका भेटेरिनरी प्राविधिज्ञ किरण रिजाल, वन्यजन्तु प्राविधिज्ञ तीर्थ लामा, दिपप्रसाद चौधरी र विनोद दराई गैँंडासँगै चीन जाँदै छन् ।